किन आयो राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न वामदेवको दावेदारी ? | Kendrabindu Nepal Online News
31829935 976356 7422336 23431243
67804 436 17414 49954
किन आयो राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न वामदेवको दावेदारी ?
१६ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:०३
केही समय अगाडि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न अस्वीकार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका छन् । सोमबार उनले आफैं र सचिवालयमार्फत् आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
पछिल्लो एक टीभी अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषय बन्द भएको बताएपछि सोमबार गौतमले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेट गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यही भेटमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा र सरकारमा जाने विषय प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका थिए ।
गौतमले आफूलाई प्रतिनिधिसभा लैजाने योजना पूरा हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभामा जान चासो व्यक्त गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस प्रतिक्रिया नदिएको गौतमनिकट स्रोतले बताएको छ । गौतमले आफू सरकारमा जान पनि तयार रहेको बताएर पार्टीभित्र नयाँ अध्यायको सुरुवात गराएका छन् । गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने अडान राखेका छन् ।
स्रोतले बताए अनुसार त्यसपछि यसबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिएका गौतमले साँझ आफ्नो मत सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावले नेकपाको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । यो विषय भदौ १८ मा बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाउने निश्चित छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने एक सीट फागुनदेखि खाली छ । यो सीटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो दावेदारी पेश गरेका हुन् । यसले नेकपाको राजनीति फेरि नयाँ किसिमको धुव्रीकरणमा जाने सम्भावना बढाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार सचिवालय बैठक बस्दैछ ।
सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा सपथ लिएका थिए । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदैछ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
यही बेला गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय लागू गर्न माग गरेका हुन् । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका उपाध्यक्ष गौतमले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । खतिवडालाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याउने विषयमा नेकपा सचिवालयमा पनि बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ ।कान्तिपुरबाट
राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न वामदेवको दावेदारी
Prevसरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार शैयाको क्वारेन्टिन बनाउने
कोरोना संक्रमणपछि काठमाडौंका मेयर शाक्य होम आइसोलेशनमाNext
सबै उमेर समूहको साफ प्रतियोगिता रद्द
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
राष्ट्रिय प्रतियोगिता मंसिरमा गर्ने क्यानको तयारी
कालोबजारी गर्नेबाट जफत गरिएको प्याज प्रतिकेजी ६० रुपैंयाँमा बिक्री गरिंदै
नेपालका बैंक कालोधन ओसारपसारमा संलग्न : राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्दै
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सांसदको दाबी
को बन्ला अबको नयाँ अर्थमन्त्री ? गौतमको रुवावासी, केन्द्रमा पौडेल
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ संशोधन गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन
काठमाडौं उपत्यकामा आज ६३७ जना संक्रमित थपिए
आज एकै दिन निको हुनेको संख्या १ हजार ८९३